INkosi yaseMathulini ikhala ngokuqhubulushwa - Bayede News
INkosi yaseMathulini ikhala ngokuqhubulushwa
Isithombe: Parliament SA
Ikhala ngozungu olwakhiwa osopolitiki bakaKhongolose iNkosi yaseMathulini, eMthwalume, KwaZulu- Natal kulandela isinqumo esithathwe ihhovisi likaNdunankulu wesifundazwe, uMnu uSihle Zikalala, sokuthi ihoxiswe esihlalweni ngezinsolo zokungaziphathi kahle.
Isinqumo sokumisa iNkosi uBhekizizwe Nivard Luthuli sithathwe mhla ziyisi-9 kuMfumfu wezi-2020 yiHhovisi likaNdunankulu ngaphansi kweSigaba 21(1) iKwaZulu Natal Traditional Leadership and Governance Act, 2005 (Act No. 5 of 2005).
Ukumiswa kwayo kumayelana nezinsolo zokuthi ikhokhisa amalungu omphakathi imali ebizwa ngokuthi yiKhonza Fee ekhokhwa yilabo abafuna iziza endaweni nokunye. Kuthiwa kuyenzeka amanye amalungu omphakathi akhokhiswe imali ebalelwe ezi-R3 000 ukuya phezulu. Baphinde bakhale nangemali eyizi-R2 000 ekhokhiswa umndeni oshonelwe yokuguqulwa kwamabhantshi neyamafomu oMnyango Wezezindlu eli-R180.
INkosi ikhala ngokuthi indaba kayikho ezinsolweni ebekwa zona kepha isekutheni ihlukunyezwa ngoba iyilungu le-Inkatha Freedon Party (IFP) njengoba iphinde yaqokelwa ePhalamende likazwelonke.
Kulokhu iqagula amagama osopolitiki abakhulu okubalwa kubo noNdunankulu uZikalala ophinde abe uSihlalo we-African National Congress (ANC) KwaZulu-Natal ukuthi ulugagamele udaba njengoba kade emncenga ukuthi ajoyine iqembu lakhe.
“Uma ngikhumbula kahle kwakungeminyaka yezi-2000 esasophikweni lwentsha uKhuzeni lapho bafika behlasele kwami beyinqwaba bezongincenga ukuthi ngiye kuKhongolose kodwa nganqaba,” isho kanje.
Ithe kakuyena yedwa kodwa ikhona nenye inkosi eke yabhekana nenkinga efana nalena ngoba nayo iyi-IFP.
“Konke lokhu okuthiwa yinkohlakalo engiyenzayo kuyenziwa nangamanye aMakhosi kodwa awajahwa njengami kangangoba le mali iphinde ingene esikhwamini seTrust yakwaCogta futhi icwaningwa yibona,” kusho iNkosi uLuthuli.
Ithe inkinga isokhethweni njengoba behlukunyezwa njalo uma selusondele ngoba sebeyabona ukuthi abantu bahlakaniphile bayabubona ubuqili bukaKhongolose futhi kabasawethembi.
“Bangithole kanjani nginecala ngingaboshwanga noma kuyiwe enkantolo…lento icace bha ukuthi inenhlese yepolitiki ebheke ukwehlisa isithunzi sami nokuthi ngihlukunyezwe yingakho lolu daba ngivele ngalufaka enkantolo,” kusho iNkosi uLuthuli.
Ibuze ukuthi ikhishwa ngamuphi umthetho ngoba umndeni neSILO kuphela abanelungelo lokwenza lokho hhayi uHulumeni onentshisekelo yawo yezombangazwe.
Kuthiwa indaba yasuka emhlanganweni owawubanjwe uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu endaweni mhla zili-10 kuMfumfu okwakukhona kuwo nesikhulu soMnyanga igama laso esiligodlile lapho okwabakhona abantu abangaphezulu kwe-15 abakhalaza ngeNkosi.
Mhla zili-18 kuMfumfu umndeni ubize iNkosi nomphakathi ukuzwa ukuthi kwenzekani kwaba nezinkulumo ezingezinhle ngayo nokuthi kwenzeka kanjani uCogta abiza umhlangano endaweni engadlulanga eNkosini kube kuyokhulunywa ngayo.
USihlalo womndeni wakwaLuthuli, uMnu uMlungisi Mthunzi, uthi nabo babecabanga ukuthi kukhona iNkosi ebafihlela kona engafuni bakwazi.
“Kodwa-ke ithe uma isisichazela sabona ukuthi kunabantu abathile okubalwa kubo noSomlomo woMkhandlu waseMzumbu uNkk Matho Shozi abaphehla lokho ngoba kuthiwa uyena owayehola umhlangano obunabakwa Cogta,” kusho uMthunzi.
Uthe abagcinanga lapho udaba baludlulisele kuBayede ngoba ngeke kuthathwe isinqumo esifana nalesi engaziswanga.
Kulokhu iNkosi uLuthuli ifakazelwe nanguSihlalo woGu Local House iNkosi uSifiso Shinga ukuthi inkosi ayisuswa noma yikanjani kuba nemigudu kubhekwe amacala ebhekene nawo kwaziswe iSILO futhi kube nezexwayiso okudlulwa kuzona. Ithe yize bengeke bakhulume kakhulu ngodaba ngoba basaluzwa emoyeni, akekho oke wafika esuka eMnyangweni noma eHhovisi likaNdunankulu ukuzobachazela.
“Empeleni thina sasifisa ukuthi lwethulwe kuthina singakathathwa isinqumo sibheke ukuthi konke kulandelwe ngendlela yini ngoba empeleni wumndeni noBayede abanelungelo lokwenza lokho. Sibona sengathi uHulumeni ulugagamele kakhulu lolu daba,” kusho iNkosi uShinga.
Ubuhle buzobe buseNyokeni kule mpelasonto
Ithe bayafisa ukuthi bachazelwe ukuze bathi noma bethatha isinqumo sokuyeseka iNkosi uLuthuli babe benolwazi ukuthi kwenzekani. INkosi uShinga ivumile ukuthi zibakhona izimali abazibiza emphakathini ezindaweni zabo futhi abakuboni kuyicala lokho ngoba yinto yasendulo.
Osehhovisi leSILO, uMnu uNhlamvuyelanga Sithole, uthe udaba selufikile ezandleni zabo kodwa basalinde uHulumeni abanikeze uhlangothi lwabo.
Uthe empeleni imithetho okusetshenzwa ngayo inika uHulumeni amandla kodwa akuvele kuthathwe nje isinqumo kunemigidu elandelwayo kubukwe necala leyo nkosi ebhekene nalo.
Icala belilalelwe eNkantolo Enkulu eMgungundlovu ngesikhathi sokushicilela.
Ethintwa uSomlomo uNkk uShozi uthe lolu wudaba olubucayi kakhulu olungadingi ukuthi umuntu aphaphazele.
“Ngeke ngikufihle ukuthi ngempela yimina ohola imihlangano ngoba nginguSomlomo ohola yonke imihlangano yendawo okubalwa kuyo eyoMkhandlu nomphakathi,” kusho uSomlomo.
Uthe bawuMkhandlu osebenzisana kakhulu naMakhosi ahlukene angeke-ke akwazi yena yedwa ukuba namandla okukhipha iNkosi uLuthuli inyumbazana.
“Le ndaba iqalwe abantu hhayi thina yibona abakhalazile,” usho kanje.
UMnu uLennox Mabaso okhulumela iHhovisi likaNdunankulu uKhuzeni ugcine engabuyelanga kwelaboHlanga njengoba ebethembisile nemiqhafazo ayithunyelelwe akayiphendulanga.
ngu-Andile Moshoeshoe Nov 6, 2020